Koobka Fifa: Cameroon ayaa ku guuleysatay Koobka kubadda cagta ee dunida 54e - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Koobka Adduunka: Cameroon ayaa ku guuleysatay Koobka kubadda cagta adduunka ee 54e
Libaaxyada aan laxaadka laheyn ayaa ka faa'iideysanaya laba meelood oo ka mid ah qiimeynta Fifa ee bishii Abriil ee la sameeyay Khamiistii.
Cameroon ayaa iyaduna horumarineysa booska ay ku leedahay qiimeynta adduunka ugu weyn ee kubada cagta, taasoo ah bil kasta xiriirka kubada cagta ee Fifa. Waddanku wuxuu heystaa meel 54e ah oo heer caalami ah. Ama laba dhibcood ayaa la kasbaday marka la barbardhigo Maarso marka Cameroon lagu daro 56e.
Cameroon ayaa isku mid noqota kubadda cagta toddobaad ee kubada cagta ee qaaradda. Waxqabadka shaki kuma jiro inuu guuleystay guushii Comoros 23 bishii March ee la soo dhaafay, intii lagu jiray maalinta ugu dambeysa ee wareega isreebreebka ee 2019.
Lions Indomitable Lions ayaa sidaas darteed dib u soo noqnoqonaya ka dib markii maalmo fiican ay ku jireen xilligii 2002-2009 halkaas oo xulashadu inta badan 10e qaran kubada cagta adduunka.
The darajayn March Fifa waxaa lagu calaamadeeyay by joogitaanka Belgium ee munaaraddii dunida, raaceen by France (0 ku guuleystay buundo), Brazil (0 dhibcood helay) iyo England (1 ku guuleystay buundo). In Africa, Kooxahan kubada cagta waa Senegal (World 23e), Tunisia (28emondial), Nigeria (World 42e) iyo Morocco (World 45e).
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/08/classement-fifa-le-cameroun-classe-54e-nation-de-football-dans-le-monde/
CAN 2019-Draw: CAF waxay diideysaa koofiyadaha (rasmi ah)